भारतमा चक्रवात बन्दै, नेपालमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना:: Naya Nepal
भारतमा चक्रवात बन्दै, नेपालमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना
भारत बंगालको खाडीमा चक्रवात विकास हुने क्रममा रहेको र त्यो उत्तर सरेका खण्डमा नेपालमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना देखिएको मौसमविद्ले बताएका छन्।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका माैसमविद् समीर श्रेष्ठका अनुसार बंगाल खाडीको उत्तर पश्चिम भागमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रबाट सामुद्रिक आँधी (चक्रवात) विकास हुने क्रममा रहेको हो।
‘यो चक्रवात बनेर नेपालतिर सर्‍याे भने प्रदेश १ देखि ४ (गण्डकी) सम्मै पानी पार्ने सम्भावना छ,’ मौसमविद् श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले अहिले हामी बंगालको खाडीमा बनेको यो सिस्टम अध्ययन गरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार चक्रवात विकास भयाे र त्यसकाे असर नेपालमा पर्‍याे भने यही अक्टोबर ११/१२ तारिखतिर नेपालमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना देखिएको हो।
‘तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपाललाई त्यति असर नगर्ला कि भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो (आँधी) जमिनमा ठोक्किएपछि दिशा परिवर्तन गर्छ, अहिले हामी अध्ययनकै चरणमा छौं।’
मौसमविद् श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि पूर्वी क्षेत्रमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। ‘हिजो राति पनि उदयपुरमा हावाहुरीसहित वर्षा भएको थियो,’ उनले भने।
मौसमविद्का अनुसार बंगालको खाडीमा रहेको त्यही न्यून चापीय क्षेत्रकै कारण नेपालबाट अझै मनसुन नबाहिरिएको हो।
मौसमविद् श्रेष्ठका अनुसार नेपालको पश्चिमी क्षेत्र लगभग प्रदेश ३ को पश्चिमी भागसम्म मनसुन बाहिरिसकेको छ, सुक्खा सुक्खा भइसकेको छ।
तर पूर्वी क्षेत्रमा भने अझै मनसुन जारी छ। अझ बंगालको खाडीमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र शक्तिशाली बन्दै गएको र चक्रवात बन्ने क्रममा रहेकाले नेपालमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना बढेको हो।
मौसमविद्का अनुसार नेपालबाट मनसुन बाहिरिने औसत मिति सेप्टेम्बर २७ हो। तर यस वर्ष यो मितिकै आसपास झन् ठूलो वर्षा भएको थियो।
केही वर्षयता मसनसुनको अवधि लम्बिइरहेको छ। मौसमविद् श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा लामो समय अक्टोबर १९ तारिखसम्म पनि मनसुन बसेको रेकर्ड छ।
सरकार र डा.केसी सहमति नजिक, प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाइयो
सरकारी वार्ता टोली र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ।
बिहीबार दुई चरणमा भएको वार्तामा प्रारम्भिक सहमति जुटेको हो। सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा मुख्यसचिवमार्फत गए राति नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीकहाँ पठाइएको छ। आज (शुक्रबार) थप वार्ता गरेर औपचारिक सहमति गर्ने तयारी दुई पक्षले गरेका छन्।
बिहीबार बिहान साढे १० बजेबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सरकार र डा.केसी पक्षबीच वार्ता शुरु भएको थियो। वार्ता दिउँसो २ घण्टा रोकिएर पुनः सुरु भएको थियो। वार्ताका क्रममा उठेका विषयमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुबै टोली राति साढे ८ पुनः छुट्टा छुट्टै छलफलमा बसेका थिए। त्यसपछि भएको वार्तामा प्रारम्भिक सहमति जुटेको हो।
डा.केसी पक्षका वार्ता समितिका सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मस्यौदामा अध्ययन गरेपछि आज थप छलफल हुने छ।
कार्कीले बिहीबारका दुई वार्ता सकारात्मक भएको बताए। चिकित्सा शिक्षा सुधारसहितका विभिन्न ६ सूत्रीय माग राखेर डा.केसी २५ दिनदेखि अनशनरमा छन्।
यस्ता छन् केसीका माग र सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा
सहमतिको मस्यौदा : डा.केसीले उठाएको पहिलो मागप्रति दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरू आउने वर्ष अर्थात् आगामी वर्षबाट एमबिबिएसको सिट निर्धारण गरी पठनपाठन सुरु गर्ने र त्यसका लागि चाहिने स्रोत–साधन अहिल्यैदेखि जुटाउन सुरु गर्नेमा सहमत भएका छन् ।
माग ६ : राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
यो मागमा भने खासै छलफल भएको छैन।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखी डा. केसी २५ दिनदेखि अनसनमा छन्। लामो असनले डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ।
कोभिड १९ र मौसमी फ्लूको ‘ककटेल’ले ‘ट्वीनडेमिक’ : कसरी जोगिने यो कहरमा?